Youchọghị Onye Ọkachamara SEO! | Martech Zone
Tuesday, January 20, 2009 Fraịde, Ọktọba 17, 2014 Douglas Karr
N'ebe ahụ ... M kwuru ya! Ekwuru m ya n'ihi na m na-ahụ ego niile ejiri na njikarịcha nyocha site na obere azụmaahịa na ọkara, echekwara m na ọ bụ raketị. Nke a bụ echiche m banyere ụlọ ọrụ njikarịcha search engine:
Ihe ka ọtụtụ njikarịcha Nchọgharị Na-adaba n'ime na-ede ederede di ukwuu, na-adọta ikike backlinks na na ọdịnaya na ịgbaso omume ole na ole kachasị mma. Ihe ndị a bụ isi ihe onye ọ bụla nwere ike ịgbaso - mana ọtụtụ anaghị eme.
M ka na-ahụ ọnụ ọgụgụ nke saịtị ọhụrụ na-akụ ahịa ahụ nke dị arọ na ederede ederede, na anaghị eji ihe dị mfe dịka isiokwu, isi okwu, wdg. Ndụmọdụ ndị a, nke m dere banyere ugboro ugboro na blọọgụ m ma hụ karịa na blọọgụ ndị ọzọ ga-enweta saịtị gị 99% nke ụzọ.
Nke bụ eziokwu bụ nke a: Ọ bụrụ na ị dee ọdịnaya dị mkpa oge niile na-etinye mkpụrụokwu na ahịrịokwu nke ndị nyocha na-achọ, a ga-ahụ saịtị gị. Mmetụta nke ọdịnaya ahụ ga- dwarf tweaking ọ bụla nke ọkachamara SEO ọ bụla nwere ike nweta. Kwụsị imefu ego gị wee bido dee ọdịnaya!
N'ihi ya, ọtụtụ folks amasị arụmụka ihe nzuzo nke search engines na ihe ndị dị ka URL ogologo, outbound njikọ, nofollow, wdg, wdg… ma ha na-egwu egwu na 1%. Chọpụta, n'ihi na ụfọdụ ulo oru, na obere 1% nwere ike ịbụ ihe dị iche na nde dollar… ma n'ihi na mụ na gị, ọ bụ iberibe.
Ihe nzuzo nke ụlọ ọrụ ahụ bụ 99.99% nke asọmpi gị enweghị ntụle ihe ha na-eme. Dee ọdịnaya dị mkpa, nke na-akpali akpali ma ị ga-emeri n'ọgụ ahụ na ọchụchọ.
Tags: content Marketingdiymee ya n'onwe gịka esi eme seoesi ebuli maka ọchụchọsearch engine njikarịchaAseo ọkachamaraseo ọkachamara
Akwa. Nkọwa gị doro anya na ọbụnadị ọkachamara ahụ anaghị ekwenye. Olileanya na ị ga-akọwakwuru ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Ekwenyere m na mmetụta gị na anụ na poteto (ọdịnaya) dị mkpa karịa gravy (njikarịcha SEO), mana m na-eche ma ị na-atụ aro ka ị ghara ichegbu onwe gị banyere SEO kpamkpam…
Agụwo m gburugburu internets na e nwere ihe ndị na-ede blọgụ kwesịrị ime iji bulie ihe ha dere, dị ka iburu isiokwu dabere na ọchịchọ wee fesaa mkpụrụ okwu ahụ na post ahụ ọbụlagodi oge X ma ọ bụghị karịa oge XX, wdg.
You na-eche na a ka kwesịrị ime, ma ọ bụ ka anyị gafere ya ma lekwasị anya na ederede maka ntanetịime ntanetị?
Followinggbaso omume kachasị mma nke SEO bụ ihe dị mkpa. Inwe peeji nke emebere nke ọma, ịnwe saịtị nke na-eji ngwaọrụ dị ka saịtị saịtị iji gosipụta engines ọchụchọ ebe ị ga-ele anya na ihe dị mkpa, wdg.
Ọtụtụ mmadụ, ọkachasị ndị SEO “ọkacha mara” na-arụ ụka nuances nke SEO kama ịdụ ndị ahịa ha ọdụ ịchọta nnukwu ikpo okwu… ma dee ihe na ya. Ezigbo usoro njikwa ọdịnaya ga-etinye usoro kachasị mma dị mkpa, ma ọ bụ nwee ọtụtụ plugins / tinye-nke ga-enyere aka.
Otutu ulo oru di obere na etiti ego na etinye oge na ego na 1% kama iru oru n’ebe ha nwere ike ime ihe di iche!
Chris, enweghị usoro X-pụrụ iche pụrụ iche. Ọ gbagwojuru anya karịa nke ahụ ma nwee ọfụma SEO na-elegharakarị isiokwu ugboro ugboro anya mana ị kwesịrị ijide n'aka na ị ga-eji ahịrịokwu dị mkpa na ụdị dị iche iche nke ha na post gị.
Inghọrọ ahịrịokwu ndị ama ama NA isiokwu dị oke mkpa dịkwa mkpa mana echere m na nke a dabara na "ọdịnaya" nke eserese na post Doug, ọ bụghị akụkụ SEO ọkachamara. Ọ bụrụ na SEO bụ akụkụ nke usoro ịde blọgụ gị, karịa ịhọrọ isiokwu dị ezigbo mkpa.
Jenụwarị 20, 2009 na 4:39 PM
James kwuru eziokwu - nke ahụ bụ ihe m kwuru site na ịde ọdịnaya dị mkpa. Simplychọghị ọkachamara iji mezuo nke a.
Dị ka SEO “ọkachamara” m ga-eme ka ikwu ebe a. Ọ bụrụ na ịchọọ “wijetị” na Google ugbu a, enwere nsonaazụ 128,000,000.
Naanị 10 na-egosi na ibe mbụ na naanị 1 nọ n'ọnọdụ kachasị elu. Na 10 bụ ihe na-erughị 1% nke nsonaazụ.
Ọ bụ ezie na nke a bụ oke ihe atụ, ma mụ onwe m kwenyere n'echiche nke post Doug, buru n'uche na na ụlọ ọrụ asọmpi 1% Doug na-apụtakarị nwere ike bụrụ ihe dị iche n'etiti ntụpọ dị elu ma ọ bụ ntụpọ 3rd. Doug si na okwuru ya kwuru na nke a nwere ike bụrụ ikpe, oge ụfọdụ, m na-ebili maka ụmụnne m SEO obere 🙂 <- maka Doug Thesis, n'ime egwuregwu
Ọdịnaya na backlinks bụ ntọala SEO. Lekwasị anya na ha ruo mgbe ị rụchara ọrụ ha niile.
Daalụ maka ide ihe a - ọ dị mma ịhụ ụlọ ọrụ na-egosipụta nghọta zuru oke iji kwuo “ịchọghị ọkachamara” mgbe ị na-ekwu okwu site n’oche ọkachamara. Ee, ọ bụ ọrụ siri ike, mana nke ahụ bụ ihe ọ na-ewe.
Ekwetaghị m na nkwenye gị isi. Ana m arụ ọrụ na SEO ma ọ bụ ọrụ m hụrụ n'anya. SEO bụ akụkụ dị mkpa nke mmepe weebụ nke a na-apụghị ileghara anya. Nsogbu bụ na, ọtụtụ mgbe, a na-eleghara ya anya maka ọdịdị ọkụ na mmejuputa na-adịghị mma.
Lee ya otú a. Ndị ụlọ ọrụ achọghị ịtụgharị uche na SEO. Ha ga - acho igwa onye ozo ka o chee banyere ya ma hu na ha na eme ya. Dị nnọọ ka ha ga-achọ ịkwụ ụgwọ onye ọzọ iche echiche maka imewe. Isi nsogbu bụ na ọtụtụ ndị na-emepụta echeghị banyere SEO.
Kedu ihe kpatara mmadụ ga-eji kwụọ ụgwọ maka komputa kompeni kom komiti, ebe enwere ọtụtụ nhọrọ na - arụ ọrụ nke ọma? Ọ naghị ewe nnukwu ihe iji tụfuo WordPress na ihe nkesa na-akwado onwe ya wee bido ịde blọgụ. Mana ndị mmadụ na-akwụ gị ụgwọ maka nka gị, nke ahụ bụ ihe ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ mgbe ha zụtara ndụmọdụ SEO.
Agaghị m arụ ụka na enwere ọtụtụ SEO nke na-amaghị ihe ọ bụla n'ebe ahụ, mana ị ga-agba ọsọ na nke ahụ n'ọhịa ọ bụla. Eziokwu nke okwu a bụ, Amaara m SEO ma rụọ ọrụ kachasị mma m nwere ike maka ndị ahịa.
Yabụ, ụlọ ọrụ chọrọ ndị ọkachamara SEO, ọ bụrụ na ha enweghị ike imenye ụjọ ịmụ banyere SEO n'onwe ha.
Jenụwarị 20, 2009 na 4:43 PM
Jonathan - Echere m na ị na-ekwu okwu m ebe a! Ihe kpatara na mmadu gha acho itinye blog ha n’elu ikpo okwu dika Compendium bu ka ha ghara ichegbu onwe ha banyere SEO!
Ekwenyere m na ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị nọ na agha maka 4 kachasị elu ma ekwupụta m na enwere 1% (ma ọ bụ obere) nke kwesịrị ịkpọtụrụ ọkachamara SEO iji nyere ha aka.
My post bụ n'ezie banyere nkezi ụlọ ọrụ… ọtụtụ n'ime ha nanị ga-ahụ a ọma n'elu ikpo okwu na-tinye n'ọrụ SEO kasị mma omume, dee mkpa ọdịnaya, na-eme ka ọ na-akpali akpali ịdọrọ uche. Nke ahụ achọghị 'ọkachamara'.
Jenụwarị 20, 2009 na 4:34 PM
Belụsọ na ị raara onwe gị nye 100% maka njikarịcha njin ọchụchọ ị ga-akwụ ụgwọ SEO. Usoro nyocha njikarịcha ihe nfe dị mfe mana n'ezie ịnye ogo webụsaịtị na-ewe ọtụtụ ọrụ yana ihe ọmụma.
Jenụwarị 20, 2009 na 10:19 PM
Akwa post! Agụọla m gị blog ogologo oge iji mara na ị nwere ezigbo ọfụma, yabụ lee:
Echere m na ị na-ata ahụhụ site na "Nkọcha nke Ihe Ọmụma". Nkọcha nke Ihe Ọmụma bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị ọrụ aka (ana m emekpa ahụ), na-eme ma ha chefuo ihe ọ dị na mbido mgbe ha amaghị ihe ọ bụla.
Ndị mmadụ nwere obere websaịtị azụmaahịa kwesịrị ịma ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na ha nwere olile anya ime nke ọma na igwe nchọta ihe nchọta.
You mụtara ihe niile gbasara SEO ka ị wuru saịtị a, mana nke ahụ bụ oge gara aga ma ugbu a ọ na-esiri ike icheta ihe niile ị mụtara n'okporo ụzọ.
Nke a bụ naanị ntakịrị ihe atụ nke ihe ị mụtara “na Job” na saịtị gị:
Mgbe ị bugharịrị saịtị gị
Mbugharị a chọrọ ka ị:
Wụnye ma ghọta nchịkọta Google na ngwaọrụ webmaster (iji jide n'aka na njikọ ndị ahụ na-agagharị, yana traft),
Jiri redire 301 (n'ime faịlụ .htaccess gị)
Mepụta faịlụ robots.txt (nke gị abụghị ihe efu ma ọ bụghị ndabere)
Zere oyiri ọdịnaya na canonical akpọ okwu
Na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ụzọ.
Mbugharị saịtị gị agaghị abụ ọrụ dị mfe maka onye na-abụghị ọkachamara, ma cheta, nke ahụ bụ naanị otu ihe atụ nke ozi bara uru ị bulitere n'ụzọ!
Rank na-ọkwa nke ọma maka okwu ndị dị ka "teknụzụ ahịa" n'ihi na ị na-ede nke ọma, na n'ihi na ị maara ọtụtụ ihe banyere SEO.
Yabụ, ọ bụrụhaala na anyị gụnyere akụkụ teknụzụ ndị a nke SEO na "Omume Kasị Mma" ekwenyere m kpamkpam.
Jenụwarị 20, 2009 na 11:27 PM
Na-agba! N'ezie ị maara m nke ọma, Pat!
Ọ bụ eziokwu na m maa dabble na tweak saịtị m maka SEO dịtụ ntakịrị. Agbanyeghị, isi m dị n'elu anaghị ele m anya, ọ na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ nkezi na net. M tweak na tweak na tweak ọtụtụ n'ihi na m bụ obere geek.
N'ikwu eziokwu ọ bụla, enwere m ike imebi ihe karịa ogologo oge.
Ekwuru eziokwu, ekwetakwara m na ọ bụrụ na agbadoro m ọdịnaya m nke ọma ma, ikekwe, wuru ọtụtụ blọọgụ - na m ga-etinyekwu uche karịa. Ihe ndị dị mkpa, ọdịnaya na-agakarị… na-enweta oge ọ bụla.
Daalụ maka nnukwu ikwu!
Hit kụrụ ntu ahụ smack n'isi ọzọ. Nsogbu a na-akawanye njọ na obere azụmaahịa azụmaahịa obere na etiti n'ihi na ihe ọmụma ha banyere web yana weebụsaịtị pere mpe ma a manyere ha ịdabere na ndị na-ahụ maka ndụmọdụ ọbụna ide na itinye ọdịnaya maka ha. Ha bụ n'ụzọ nkịtị nke ebere nke ndị na-ahụ maka weebụ ma ha na-agbanye SEO na obere azụmaahịa na-azụ ya. Ọtụtụ ndị ndụmọdụ a bụ ndị na-ewu saịtị maka ha abụghị ihe ọ bụla karịa ndị na-emepụta ihe bụ ndị nwere mmasị naanị maka nka saịtị ahụ dị n'ihi na ọ bụ otu ahụ ka ha si eche echiche na ihe ha ghọtara.
Jenụwarị 21, 2009 na 4:54 PM
Doug, nkwupụta gị "Dee ọdịnaya dị mkpa, na-akpali akpali ma ị nwere ike imeri n'ọgụ na ọchụchọ" ziri ezi na ego ahụ. Ihe mmuta m mutara: buru isiokwu i nwere obi uto na ya, dee ihe oge obula ma jikọta ndi ozo. Mgbe ntakịrị ihe karịrị otu afọ ọ malitere ịrụ ọrụ. Na na na na na na na na na na na na na ngụ Michael
Ikwuru na ihe ịga nke ọma nke weebụsaịtị na hetting ghọtara nwere ike ikwu na ọdịnaya na backlinks. Agbanyeghị, ịnweghị ike ịtụfu ndị ọkachamara SEO kpamkpam. Ihe a na - akpọ ha bụ ndị ọkachamara SEO kwuru na ha maara ihe ị ga - eme na weebụsaịtị gị iji mee ka ọ daa na peeji nke elu nke google.